Miaina miaraka amin'ny 30x30
Famerenana ny fiainana an-dranomasina
Ankoatra ny jono
Vahaolana momba ny toetrandro
Ny fitovian'ny lahy sy ny vavy
Manova trondro ambany
30 x 30 ary vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana
30 x 30 dia tanjona vaovao fatra-paniry laza mba hiarovana ny 30%-n'ny planeta amin'ny taona 2030. Nanohana izany ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa sy governemanta eran-tany. Nanohana izany ny vondrona G7 an'ny firenena manankarena. Rehefa mihaona any Shina ny antoko amin'ny Fifanarahana momba ny Fahasamihafana Biolojika amin'ny 2022 mba hiresaka momba ny hoavin'ny fiarovana, dia 30 × 30 no mety ho ambony indrindra amin'ny fandaharam-potoanany.
Raha ankatoavina, 30×30 no tetikasam-pitantanana an-drano lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona – mila velaran-dranomasina fanampiny izay efa ho avo telo heny noho i Afrika.
Ny fampitomboana ny ezaka fiarovana tsy mbola nisy toy izany dia mitondra fanamby, fahafaha-manao ary fifanakalozam-bola izay ilain'ny fanjakana amorontsiraka. Misy fahasahiranana azo ampiharina lehibe amin'ny fampiharana ny 30×30 amin'ny fomba mahomby ary mety hiparitaka be ny voka-dratsin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny Vazimba avy amin'ny fanaovana izany.
Blue Ventures dia fikambanana mpiaro ny tontolo iainana. Ekenay ny maha zava-dehibe ny fampitomboana ny fiarovana ny ranomasina. Ary mino izahay fa ny fiarovana tarihin'ny vondrom-piarahamonina, ho an'ny vondrom-piarahamonina, no hany lalana azo ampiasaina amin'ny fiarovana ny ranomasina amorontsiraka.
Ampidino ny taratasin'ny toeranay
30 x 30 sy vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana
Arovy ny zon'ny vondrom-piarahamonina
Mino ny Blue Ventures fa ny fomba tsara indrindra hiarovana ny zavaboary dia ny fiarovana ny zon'olombelona ho an'ireo izay monina eo aminy sy miankina amin'izany. Ny drafitra Global Biodiversity Framework - miaraka amin'ny tanjona 30 × 30 - dia mitaky fiovana amin'ny fanovana saingy maivana amin'ny fomba mety hahatratrarana izany. Mba hahatonga ny 30 × 30 ho marina, mahomby ary mahomby, dia ilaina ny manatanteraka ireto fanoloran-tena valo manaraka ireto.
1 - Fitondrana azo antoka ho an'ny rehetra
2 - Ny fahafahana miteny hoe tsia
3 - Fanoloran-tena maneran-tany amin'ny fahamarinana
4 - Mangarahara sy fandraisana andraikitra
Ekeo sy hajao ny anaram-boninahitra, ny fananan-tany, ny fidirana ary ny zo amin'ny fananan-tany sy ny ranomasina. Manaja sy manaja ny fifanarahana sy ny fitsipika iraisam-pirenena, anisan'izany ny Torolàlana an-tsitrapo FAO momba ny fiarovana ny jono kely maharitra, ny Fanambaran'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ny vahoaka indizeny, ary ny fanekena maimaim-poana, mialoha ary nampahafantarina.
Ekeo fa ny fanekena maimaim-poana, mialoha ary nampahafantarina dia midika hoe fanajana ny zon'ny vondrom-piarahamonina sy ny Vazimba tsy mandray anjara amin'ny dingana 30 × 30 ary tsy manana ny faritaniny voatondro ho OECM na faritra arovana.
Manolo-tena an-kitsirano ao anatin'ny Rafitra mba hiantohana fa ny vesatra sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana dia zaraina ara-drariny sy ara-drariny, mba tsy hiharan'ny fahorian'ny olona faran'izay marefo eto an-tany. Manaiky sy miaro ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny ary koa ny zon'ny vondrona manokana toy ny vehivavy sy ny tanora.
Ho an'ny faritra arovana izay misy ny fandraisan'anjaran'ny governemanta avo lenta sy ny fiarovana henjana, manangana rafitra fitarainana misokatra sy mafonja mba hamahana ny fifanolanana eo amin'ny sehatry ny tetibola ary hiantohana ny fandrenesana ny feon'ny vondrom-piarahamonina sy hampisondrotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mitaky fiarovana mafy orina sy eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy rafitra fandraisana andraikitra. Mitaky ny manampahefana ao amin'ny faritra arovana mba hanao tatitra ampahibemaso momba ireo refy ireo ary hampifandray ny famatsiam-bola amin'ny fanatanterahana.
Tompon-daka amin'ny fiarovana ny fiaraha-monina
Tsy maintsy ekentsika mazava tsara ny Vazimba sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ho mpanapa-kevitra voalohany amin'ny ezaka fiarovana. Tsy maintsy mamolavola rafitra fanaraha-maso matanjaka isika izay ahitana tondro miompana amin'ny zon'olombelona. Mila vahaolana maharitra maharitra izay mampifandanja ny fanambinana sy ny fiarovana, izay mahasoa ny olona sy ny zavaboary, ny vina lehibe ataontsika.
5 - 100% ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina ny rano akaikin'ny morontsiraka
6 - Fanavaozana bebe kokoa, famatsiam-bola ho an'ny fiaraha-monina
7 - Rafitra ara-dalàna tsotra kokoa
8 - Fitantanana sy angon-drakitra momba ny jono madinika tsara kokoa
Olona an'arivony tapitrisa no mipetraka eny amoron-tsiraka tropikaly. Ny ranomasimbe no mandrafitra ny 6%-n'ny ranomasimbe eran'izao tontolo izao, nefa mbola mahazaka karazany betsaka lavitra noho ny any an-dranomasina. Ataovy azo antoka fa ny Faritra an-dranomasina voatanisa eo an-toerana (LMMAs) sy ny fepetra fiarovana mahomby hafa (OECMs) no fomba fiasa mahazatra amin'ny fiarovana amin'ireo rano ireo ary mampifandray azy ireo miaraka - ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy - mba hahazoana tombony betsaka ho an'ny olona sy ny zavaboary. Miezaha hanao ny 30% amin'ny faritra tsirairay ho tena voaaro, indrindra fa ny toerana misy ny toeram-ponenana lehibe. Fantaro fa ny fiarovana dia mikasika ny fanimbana kely ary koa ny fiarovana bebe kokoa - manangana faritra fanilikilihana entin'ny vondrom-piarahamonina manerana ny faritra mety amin'ny rano amoron-tsiraka mba hanoherana ny fandrahonana toy ny jono indostrialy manimba.
Mamolavola sy mampihatra famatsiam-bola maharitra maharitra sy miovaova ho an'ny hetsika mifototra amin'ny fiaraha-monina toy ny LMMA sy OECM eo amin'ny sehatra isam-paritra sy nasionaly. Mampiasà fomba fiasa vaovao hampitana vola mivantana amin'ireo fikambanana eo an-toerana sy ireo fikambanam-piarahamonina. Fantaro ny mety ho vitan'ny LMMA sy ny OECMS mba hahazoana vokatra maharitra amin'ny fiarovana, fa koa ny zava-misy fa tsy miasa foana izy ireo ary tsy dia feno fatra-paniry laza. Ampifandraiso amin'ny fampisehoana ny famatsiam-bola.
Manamora sy manatsotra ny rafitra ara-dalàna eo amin'ny sehatra nasionaly ho an'ny hetsika mifototra amin'ny fiaraha-monina toy ny LMMA ary mizara fomba fanao tsara indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny tambajotra fianarana.
Manova ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao ary manome hery ny vondrom-piarahamonina hitantana sy hanarenana ny jono amin'ny alàlan'ny fanangonana angona nomerika, famakafakana ary tatitra. Ampitomboy ny faniriana sy ny fanohanana ny fahaiza-manao fototra, ny fanofanana ary ny fampahalalana momba ny tsena mba hampihenana ny fahapotehana sy ny fatiantoka, hanatsara ny kalitao ary hahazoana vidiny mirary.
Amin'ny farany, ny 30×30 dia fahafahana tsy manam-paharoa hampitsaharana ny fahaverezan'ny zavamananaina, hiarovana ny zon'olombelona, ​​ary hametraka ny ranomasimbe eran-tany amin'ny lalana mankany amin'ny faharetana. Tsy hahomby anefa izany raha toa ka manantitrantitra ny maha zava-dehibe ny zon’olombelona, ​​ary mametraka ny fiaraha-monina ho loha laharana. Ny fiara 30×30 tarihin'ny vondrom-piarahamonina ihany no afaka miantoka ny tsy hamonoana ny zo fototra sy ny tsy fitoviana eo amin'ny fahamaikana hanaterana ny fiarovana fanampiny ilain'ny ranomasina. Ny fiara 30×30 tarihin'ny vondrom-piarahamonina ihany no afaka mandray soa ho an'ny olona sy ny zavaboary, mitondra jono maharitra, ranomasimbe mihetsiketsika, ary fiarovana ara-tsakafo ho an'ny olona arivo tapitrisa mahery.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa Anie Tourette, Lehiben'ny Advocacy.